MỴ NƯƠNG - Ny Tany Masina Fandinihana Vietnam
Mỵ Nương (Sinoa: 媚 娘 na 媚 嬝) dia lohateny ampiasaina mandritra ny Hong Bang vanim-potoana manondro ny zanakavavin'ny Hung mpanjaka.1 Ny sasany malaza Mỵ Nương :
+ DUNG TIEN Mỵ Nương, dia zanakavavin'ny Hung Vuong faha-18. Izy dia toetra hita ao amin'ny Legend an'ny Chu Dong Tu;
+ NGOC HOA Mỵ Nương: Ny zanakavavin'ny Hung Vuong faha-18, araka ny tetiarana jade na angano tantaram-pirazanana, ny anarany dia Ngoc Hoa. Izy no mpilalao vehivavy lehibe ao amin'ny Angano momba ny Zanaka Tinh-Thuy Tinh, saika tsy nipoitra mihitsy fa voalaza fotsiny.
+ Mỵ Nương dia zanakavavin'ny praiminisitra ao amin'ny Legend an'ny Truong Chi, izay namboly fitiavana fatratra tao am-pon'ny mpanjono.
MỴ CHÂU, araka ny loharanom-baovao tsy fantatra, no lohatenin'ny Andriamatoa Tompoko - zanaka vavimatoan'ny mpanjaka, ka ny Ramatoa vadiko TIÊN DUNG voalaza etsy ambony dia fantatra koa amin'ny hoe Mỵ Châu Tien Dung.2
MỴ CHÂU, zanakavavin'i Duong Vuong araka ny Angano Mỵ Châu-Trọng Thủy, ity dia mety ho anarana mety na mety ho anaram-boninahitra fotsiny ny maha-zokiny na vavy tokana an'i Duong Vuong.3
Linh Nam chich quai, Ny tantaran'i Hong Bang Thi.
“Ny tetiaran'i jade Hung King: vanim-potoana nisy tantaram-pirenena maro misitery”. Original archive 24 aprily 2014. Accessed 20 Novambra 2013.
"Ny boky tetiarana jade sy vaovao momba ny vanim-potoana Hung Kings". Original archive 24 aprily 2014. Accessed 20 Novambra 2013.
(Visited 793 fotoana, 1 fitsidihana amin'izao fotoana izao)
← AN DƯƠNG VƯƠNG (257 BC-179 BC, 78 taona)
ĐINH BỘ LĨNH (924, Hoa Lư - 979, Hoa Lư, 55 taona) →
Comments Off ao amin'ny The NUNG Community of 54 vondrona foko any Vietnam
Lý Toét, POTRAKO Xã Xệ
Comments Off ao amin'i Lý Toét, PORTRAITS an'i Xã Xệ
Fitsidihana anio: 275
Andro farany 7 nitsidika: 2,250
Total visits: 420,501